Yakavanzika Policy Yema Potato.news App - Potatoes News
potato.news webhusaiti manejimendi inosungirwa kuchengetedza zvakavanzika zvako paInternet. Isu tinoteerera zvakanyanya kuchengetedza data rawakatipa. Yedu yekuvanzika inoenderana ne iyo General Dziviriro Dhata Kuraira (GDPR) yeEuropean Union. Izvo zvinangwa, zvatinotorera yako pachako data ndeizvi: kuvandudza sevhisi yedu, kutaurirana nevashanyi vesaiti ino, matsamba, kupa masevhisi anoenderana nehunyanzvi hwewebhusaiti, uye nezve zvimwe zviito zvakanyorwa pazasi.
Yega data yekuchengetedza uye kugadzirisa
Isu tinounganidza nekugadzirisa dhata yako wega nemvumo yako inoda. Nemvumo yako, tinokwanisa kuunganidza uye kugadzirisa data rinotevera: zita uye zita rezita, kero ye-e-mail, ruzivo rwemagariro enhau, Kuunganidzwa nekugadziriswa kwemashoko ako ega kunoitwa zvinoenderana nemitemo yeEuropean Union neRussia.
Dhata yekuchengetedza, shanduko, uye kubvisa
Mushandisi, uyo akapa mbatatisi.nhau nedhata yavo, ane kodzero yekuchinjiswa nekubviswa, pamwe nekodzero yekurangarira chibvumirano chekugadziriswa kwedata. Nguva, panguva iyo yako yega data ichachengetwa ndeiyi: 24 mwedzi. Mushure mekupedza nekugadziriswa kwedata rako rega, manejimendi manejimendi anozoibvisa zvachose. Kuti uwane yako pachako data, unogona kubata manejimendi pa: v.kovalev@agromedia.agency. Tichakwanisa kupfuudza data rako kune wechitatu bato chete nemvumo yako inoda. Kana iyo data yakaendeswa kune wechitatu bato, iyo isina kubatana nesangano redu, isu hatigone kuita chero shanduko kune iyo data.
Kugadziriswa kwekushanya kwehunyanzvi data
Zvinyorwa zve IP yako kero, nguva yekushanya, mabhurawuza marongero, mashandiro ehurongwa uye rumwe ruzivo rwehunyanzvi runochengetwa mudhatabhesi paunoshanyira matapiri.news. Iyi dhata inofanirwa kuratidzwa kwakaringana kwezviri mukati mewebhusaiti. Izvo hazvigoneke kuziva iye munhu wemuenzi achishandisa iyi data.
Ruzivo rwevana rwega
Kana iwe uri mubereki kana muchengeti zviri pamutemo wemwana ari pazera, uye iwe uchiziva kuti mwana akatipa ruzivo rwavo rwega pasina mvumo yako, ndapota taura nesu pa: v.kovalev@agromedia.agency. Izvo zvinorambidzwa kuisa yega data revashandisi vechidiki pasina chibvumirano chevabereki kana zviri pamutemo vachengeti.
Isu tinoshandisa maokie mafaera kuratidza kwakaringana kwewebhusaiti zvemukati uye nekureruka kwekutarisa matapiri.news. Iwo mafaera madiki, ayo akachengetwa pafoni yako. Ivo vanobatsira webhusaiti kuyeuka ruzivo nezve iwe, senge mumutauro upi waunoshandisa webhusaiti uye ndeapi mapeji awakatovhura. Ruzivo urwu runobatsira mukushanya kunotevera. Kutenda mafaera ekuki, kubhurawuza webhusaiti kunova kuri nyore. Unogona kudzidza zvakawanda nezve aya mafaera pano. Iwe unogona kuseta kuki yekugamuchira uye kuvharira mubrowser yako pachako. Kusakwanisa kugamuchira mafaera ekuki kunogona kudzikisira mashandiro ewebhusaiti.
Kugadziriswa kwe data rako wega nemamwe masevhisi
Iyi webhusaiti inoshandisa chechitatu-bato pamhepo masevhisi, ayo anoita kuunganidzwa kwedata, yakazvimiririra kubva kwatiri. Aya masevhisi anosanganisira: Google Analytics,.
Dhata rakaunganidzwa neaya masevhisi anogona kupihwa kune mamwe masevhisi mukati memasangano iwayo. Ivo vanogona kushandisa iyo data yekushambadzira kuita kwavo vega kushambadzira network. Iwe unogona kudzidza nezve zvibvumirano zvevashandisi veaya masangano pane avo mawebhusaiti. Iwe unogona zvakare kuramba kwavo kuunganidzwa kweako wega data. Semuenzaniso, Google Analytics Sarudza-kunze Bhurawuza Wedzera-on inogona kuwanikwa pano . Isu hatipfuure chero rako data kune mamwe masangano kana masevhisi, ayo asina kunyorwa mune ino yega yega. Sezvakasiyana, iyo data yakaunganidzwa inogona kupihwa pachikumbiro chepamutemo chevakuru vehurumende, avo vanobvumidzwa kukumbira ruzivo rwakadai.
Links vamwe Websites
Yedu webhusaiti matapiri.news inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti, ayo asiri pasi pedu. Isu hatisi mhaka yezvirimo zveaya mawebhusaiti. Tinokurudzira kuti uzvizive nemitemo yekuvanzika yewebhusaiti yega yega yaunoshanyira, kana mutemo wakadaro uripo.
Shanduko kumutemo wega
Nguva nenguva, webhusaiti yedu mbatatisi.news inogona kugadzirisa edu zvakavanzika mutemo. Isu tinozivisa nezve chero shanduko kuhurongwa hwekuvanzika, hwakaiswa pane ino peji rewebhu. Tiri kuongorora chero shanduko mumitemo, inoenderana nedata rako muEuropean Union neRussia. Kana iwe wakanyora chero rako remunhu data pane yedu webhusaiti, isu tinokuzivisa iwe nezve shanduko mune yedu yekuvanzika mutemo. Kana yako yega data, uye kunyanya, ruzivo rwako rwekuonana rwakaiswa zvisizvo, hatizokwanise kutaura newe.
Mhinduro uye zvikamu zvekupedzisira
Unogona kubata manejimendi yetapiri.news zvine chekuita nemimwe mibvunzo ine chekuita neyakavanzika mutemo pa: v.kovalev@agromedia.agency, kana nekuzadza fomu rekutaurirana rakatsanangurwa muchikamu chinoenderana che ino webhusaiti. Kana iwe usingawirirane neyakavanzika mutemo, haugone kushandisa masevhisi ematapiri.news. Mune ino kesi iwe unofanirwa kudzivirira kunoshanyira webhusaiti yedu.